Duqeymaha Mareykanka 2020 | KEYDMEDIA ONLINE
Duqeymaha Mareykanka 2020
Askarta Mareykanka ayaa intooda badan dalka laga saarey January 2021 waxyar kahor inta uusan Aqalka Cad ka tagin. Laakiin, Militeriga Mareykanka ayaa mudo 13 sano ah Howlgallo duqeymaha ah ka fulinaya gudaha Soomaaliya, kuwaasoo khasaarooyin isagu jira dhimasho iyo dhaawac kasoo gaarey shacab aan waxba galabsan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon, ayaa soo saartey warbixin cusub oo uu kusoo bandhigtay khasaaraha shacabka kasoo gaarey duqeymihii Soomaaliya ka fuliyeen sanadkii tagey ee 2020.
Pentagon-ka ayaa qirtay in hal qof oo rayid ah ay dileen sidoo kalena shan qof ay ku dhaawaceen hawlgalladii milatari ee ay ka sameeyeen Soomaaliya. Waxay Wasaaraddu qiimeysay 11 warbixin oo lagu kalsoonaan karo, kuwaasoo kamid ahaa 71 warbixin oo loo gudbiyay 2020.
Taliska Mareykanka ee Afrika wuxuu shaki geliyay warbixin loo gudbiyay oo sheegaysa in hal (1) qof oo rayid ah lagu dilay duqeyn Mareykanku ka geystay nawaaxiga Jamaame ee J/Hoose, Koonfurta Soomaaliya, Jan. 19, 2021.
Sidoo kale, Taliska Mareykanka ee Afrika wuxuu helay hal (1) warbixin laga soo xigtay ilo warbaahineed oo internetka ah oo sheegaya in saddex (3) qof oo rayid ah lagu dhaawacay duqeyntii Mareykanka ee agagaarka Kuunyo Barroow, Sh/Hoose, Koonfurta Soomaaliya, 1-dii Janaayo. 2021.
"Waxaan qireynaa in qasaaraha rayidka ah uu yahay wax laga xumaado, balse aan la iska ilaalin karin marka lagu jiro dagaalka," ayaa lagu yiri warbixinta militariga Mareykanka "waxaa naga go'an yareynta waxyeelada dadka rayidka ah."
Tani waa warbixintii shanaad ee qiimeeynta wax yeelada shacabka ilaa iyo markii Taliska Afika uu bilaabay shaacinta warbixinada ku saabsan waxyeelaynta shacabka ilaa bishii April 2020.
3 October 2020, Keydmedia Online ayaa soo daabacday warbixin ku saabsan khasaaraha dadka aan waxba galabsan ee lagu laayaya duqeymaha Mareykanka [Halkan ka akhri/daawo].
Militeriga Mareykanka ayaa mudo 13 sano ah Howlgallo duqeymaha ah ka fulinaya gudaha Soomaaliya.
Sanadkan 2020 waxuu Mareykanka fuliyay 42 duqeyn, oo ay ku dhinteen 21 qof oo shacab ahaa, oo caruur iyo haween u badan, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 11 kale oo Isbitaallo wali jiifa.
Ma ahan markii ugu horeysay uu Pentagon qarinaya tirada saxda ah ee khasaaraha shacabka kasoo gaarey duqeymihii Soomaaliya ka fuliyeen.
Labadii bishii Febuary, Sanadkii 2020, abbaare 8-dii fiidnimo, qoys ka kooban shan ayaa iyagoo u fadhiyey casho magaalada Jilib, ee gobolka Jubbada Dhexe ay duqeysay diyaarad drone ah oo Mareykanka leeyahay.
24-kii Febuary 2020, duqeyn kale oo diyaaradaha Mareykanka geysteen ayaa ka dhacay beerta Masalanja oo u dhow tuulada Kumbareere, oo 10 kiiloomitir waqooyiga ka xigta Jilib, halkaasna lagu dilay Maxamuud Salaad Maxamuud oo 53-jir ah. Wuxuu ahaa nin mooska ka ganacsada isla markaana ah maamulaha xarunta Jilib ee Hormuud Telecom, wuxuuna ifka kaga tagay xaas iyo sideed caruur ah.
Taliska Mareykanka ee Africa [AFRICOM] ayaa qoraallada uu kasoo saaro weerarada si fudud uga dhiga dhibbanayaasheeda rayidka inay yihiin 'argaggixiso’, lagu beegsaday duqeymaha diyaaradeed ee Soomaaliya.
Illaa hadda ma jirto cid dowladda Mareykanka magdhaw siisay ama ka raali-gelisay dadka shacabka ahaa ee ku dhintay duqeymaha, iyadoo dowladda Soomaaliya gabtay doorkeedii difaacida muwaadiniinteeda ajnabiga laynayo.
Dad badan oo shacab ah ayaa naftooda ku waayay duqeymaha socda, waxaana inta badan AFRICOM sheegtaa inaysan khasaaro rayid ka dhalan howlgalladooda, balse taasi beenowday kadib markii ay hadleen ehelada dhibaniyaasha.
Dowladda Soomaaliya ee uu hogaaminayo Madaxweyne Farmaajo ayaa indhaha iyo dhagaha ka qabsatay duqeymaha uu Mareykanku ka fulinaya gudaha Soomaaliya, kuna laynayo shacab aan waxba galabsan.
Muxuu salka ku hayaa walaaca Midowga Yurub?
Warar 17 January 2022 20:06
Midowga Yurub wuxuu ku doodayaa in haddii aan la helin badda Soomaaliya, ay wiiqmi doonto awoodda EU NAVFOR ee ah in ay dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah burcadbadeedda ka fuliso gobolka oo dhan.